Ngoko ufuna ukuba uphumelele ? Joyina iqela. Ngubani ongeke afune ukuhamba kwindawo eyahlukileyo eya kuyo yonke inyanga kwaye uhlawulelwe ukuxhoma elunxwemeni de kube yithuba lakho lokuphuma? Amantombazana ase-bikinis kwaye i-dudes ayinayo iikhati. Iwayini ihamba eYurophu. Ubhiya buninzi eAustralia, kwaye iHawaii iluhlaza ngokulunga. Kulungile, ngoko kukho enye into yokuba ube yi-surf yeprofestile kunokuhamba kunye nokuhamba.
Enye, uhambo aluyikuphela xa uhlala kwi-World Qualification Series (WQS) okanye ulungile ngokwaneleyo ukwenza i-World Championship Tour Tour (WCT), uzakufumana ulwa neepassports, iibango zomthwalo, kunye neetekisi lonke ixesha ukukhawuleza ukuqinisekiswa kwisangqa sendawo ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuba ukhuphiswano luqale. Umgca uyalila kwaye ukuhaha ngamagagasi, iifoto kunye nezinye izinto ezinokuthi zinokukrazula kwaye zikususe kwi sizathu sokuba uqale uqhube kwindawo yokuqala. Yongeza kwinto yokuba abaxhasi bakho baxinzezela ukuba uzuze phantsi kokusongela ukupheliswa, kwaye indawo yakho ekutyekeleni kuxhomekeke kwinqanaba lakho elipheleleyo ekupheleni kwexesha; Ngoko ke, uxinzelelo lunokucinezela.
Kodwa masibe yinyani. Kumntu ovuka ngo-6 kusasa imihla ngemihla aze asebenze ngemini yakhe embi imihla ngemihla engamakhulu amathathu ngonyaka, oku kukuvakala kakhulu. Ingxaki eyona yodwa kukuba akukho nto ikhona kuyo imali.
Ngokuqinisekileyo, kukho i-smidgen exabisekileyo yabangena kwi-WCT enokwenza imali kwiimpawu eziphakamileyo ezintandathu ezisixhenxe. Kodwa aba bantu (kwaye nditsho abafana kule ngxaki kuba kukho ukungafani ngokuhlawulekayo phakathi kwabasetyhini nabasetyhini). UKelly Slater usenokuba nguye kuphela u-surfer owenza isigidimi ngokuxhaswa yedwa, ngelixa abanye abanjengobani abafana noJoor Parkinson okanye uThaj Burrow abathembele ekudibeneyo kwemvume, kunye nemali yemali.
Uninzi lwabaqhubi be-34 abaphezulu kwi-ASP benza imali engama-300,000 ngonyaka, kodwa yonke into ixhomekeke kwindlela osebenza ngayo kunye nemisebenzi ingaba mfutshane kunye neklasi elincinane kwithuba elide lomsebenzi kwishishini kulabo abangenalo izakhono.
Isandiva ngathi imali efanelekileyo? Nangona kunjalo, cinga malunga nokuba zigidi zezigidi kunye nezigidi zabangena kwi-surfers apho, kwaye kuphela isibini sabantu abenza imali yangempela. Umgca wezantsi: aphakathi kwinqanaba lamantombazana kunye namantombazana enza indlela eya kwii-WQS kunye neziganeko azibandakanyi ezininzi kwibhanki emva kokubangela iindleko zokuhamba kunye nezihambelanayo. Enyanisweni, abaninzi abaqhankqalazi baxela ingxelo yokuphelisa ixesha lexesha elibomvu, elinomvuzo.
Uninzi lwabafowuni banqumla imali yabo kwimali evela kwimithombo emininzi. Okokuqala, ukuncintisana emincintiswaneni kunokubangela imali eyomeleleyo yemali. Imali yomvuzo wemivuzo ye-internship ye-surf ye-ASP kwi-ASP Tour ukusuka kwi $ 425,000 ukuya kwii-500,000 zamawaka, ukuphumelela kwesinye seziganeko kudla nge-$ 40,000. Iintlawulo ziyancipha ngokukhawuleza ekugqibeleni phantsi kwele nqanaba oligqibileyo. Enye imvelaphi yengeniso ye-profers yepro pro ngokusebenzisa i-sponsorship. Ngokuqhelekileyo, abaqhubi be-top-tier basayina izivumelwano zeminyaka ephakamileyo ukuya kwi-dollar yezigidi kodwa zihlala zixhomekeke kwisigaba sokuqeqeshwa kwe-surfer.
Ukongezelela kwiinkxaso, abaqhubi be-surfers banokuvumela kwakhona imizekelo ye-surfboard kunye nemigca yokutyikitya yezicathulo okanye iimpahla. Okubaluleke kakhulu, imodeli ye-surfboard yeDane Reynolds i-Dumpster Diver yenze isabelo esibalulekileyo sokuthengisa kwe-surfboard ka-2010, ngokuqinisekileyo wenza imali eninzi ngaphandle kwimeko yokukhuphisana.
Ngoko, njenge-top-tier ephumeleleyo kwi-surfer yecandelo le-WCT, unokwenza i-$ 500,000, kodwa konke oko kuxhomekeke kwiziphumo zokhuphiswano, iindleko zokuhamba, imveliso, kunye nokuvumela. I-Factor kweso sigalo singakuphonsa ekuwa kwezemali ngaphandle kwexesha lo msebenzi we-surfer ogqithiseleyo uphawula ngokufutshane. Ngoko ngokushwankqiswa, kubonakala ngathi ngaphandle kokuba u- Kanoa Igarashi okanye uJack Robinson, imbono yokwenza imali eyaneleyo yokuphila imihla yakho ngokukhululekile kwimfucuza ye-surf i-crap shot.
Kukho amantombazana kunye namantombazana aphuma apho aphuma kwixesha lokuphila: ukuhlawulwa ngokwaneleyo ukuxhasa iindwendwe ukuya kwiindawo eziqhelekileyo ukufumana izibhengezo zabo kumag, kodwa amathuba okuba iminyene kakhulu kwaye ukuba ubomi be-jet kunye nabaxhasi bemali yokulala, ulala emabhedeni, kwaye unethemba lokuba ukulimala okulandelayo akubi kakhulu (kuba awunayo inshuwalense yezempilo). Ukuba oko kusandi kakuhle, hamba oko, kodwa mhlawumbi uthathe iikholeji ezimbalwa zeekholeji endleleni.
Ukuhlaziywa kwe-Sun Bum Sunscreen
Ubume be-United States Ubudlelane neFransi
Ukuguqulwa kweMithetho yaseBrithani yokuPhathwa kweMithetho kwiShishini loPhuhliso
Uphando lweZiphumo zoPhando kwi-Access 2013